Inqubomgomo Yobumfihlo - Ipulatifomu Yesiguli Yesiyaluyalu Yomhlaba Wonke Nomoya
Inqubomgomo yobumfihloIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2020-10-06T04:53:34+02:00
Le Nqubomgomo Yobumfihlo ye-GAAPP (“Inqubomgomo Yobumfihlo”) ibeka izindlela nezinqubomgomo zobumfihlo ze-GAAPP. I-GAAPP izimisele ngokuhlonipha nokuvikela ubumfihlo bakho. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza ukuthi siluqoqa, silusebenzise kanjani, silugcine futhi siludalule kanjani ulwazi oluqoqwe lapho uvakashela iwebhusayithi yethu.
Imininingwane, efana nekheli lakho le-IP elingaziwa, isistimu yokusebenza, noma imininingwane yesiphequluli, ingaqoqwa noma nini lapho uxhumana nathi noma iwebhusayithi yethu. Siqoqa lolu lwazi ukuze sihlanganise izibalo zokusetshenziswa.
Imininingwane Yokusebenzisa Isiza
Amaseva wethu wewebhu aqoqa imininingwane yezobuchwepheshe ephathelene nezivakashi kumaWebhusayithi wethu, kufaka phakathi ikheli le-Internet Protocol (IP) elingaziwa elisetshenziselwa ukuxhuma ikhompyutha yakho kwi-Intanethi, uhlobo lwesiphequluli kanye nohlobo, ukusethwa kwendawo yesikhathi, izinhlobo zeziphequluli nezinhlobo, isistimu yokusebenza neplatifomu.
Singahle futhi siqoqe imininingwane emayelana nokuvakasha kwakho, kufaka phakathi amakhasi owabukile noma owaseshile, izikhathi zokuphendula kwamakhasi, amaphutha wokulanda, ubude bokuvakashela amakhasi athile, imininingwane yokuxhumana kwamakhasi (njengokuhamba, ukuchofoza, nokwedlulisa amagundane), izindlela ezisetshenziselwe phequlula kude nekhasi, nanoma iyiphi inombolo yocingo esetshenziselwa ukushayela inombolo yethu yesevisi yamakhasimende.
Lolu lwazi lungahlanganiswa ukukala inani lokuvakashelwa, isikhathi esimaphakathi esichithwe kwiWebhusayithi, amakhasi abukiwe, njll. Sisebenzisa lolu lwazi ukukala ukusetshenziswa kwamawebhusayithi ethu nokwenza ngcono okuqukethwe esikunikezayo. Singabelana nabantu besithathu imininingwane yolwazi engaziwa noma enye idatha ngokuhlanganisiwe ngaphandle kokusebenzisa noma yiluphi ulwazi olukuhlonza uqobo.
Noma nini lapho uxhumana nathi noma iwebhusayithi yethu, i-GAAPP ingafaka "ikhukhi" kumafayili wesiphequluli kukhompyutha yakho. Amakhukhi amafayela wedatha asiza isiphequluli sakho ukuxhumana neGAAPP.
Iziphequluli eziningi zisethwe ukwamukela amakhukhi ngokuzenzakalela. Unganqabela noma uvimbele amakhukhi ngokushintsha izilungiselelo zesiphequluli sakho. Kodwa-ke, uma isiphequluli sakho senqaba noma sivimba ikhukhi, kungathinta ikhono lakho lokusebenzisa enye iwebhusayithi yethu kanye nensizakalo yethu.
Amawebhusayithi ethu asebenzisa i-Google Analytics ukulandelela ukuthi isivakashi sibonani kuwebhusayithi yethu nokuthi imaphi amakhasi avakashelwayo. Sisebenzisa le datha ukuthola inani labantu abasebenzisa isiza sethu, ukuqonda kangcono ukuthi bathola kanjani futhi basebenzise amakhasi wethu wewebhu, futhi babone nohambo lwabo ngamawebhusayithi.
Yize iGoogle Analytics iqopha imininingwane efana nendawo, indawo esetshenziselwa ukufinyelela kuwebhusayithi yethu, isiphequluli se-inthanethi, kanye nesistimu yokusebenza, ayikhombi muntu uqobo. I-Google Analytics ibuye iqophe ikheli le-IP lekhompyutha, futhi noma lokhu kungasetshenziselwa ukukhomba umuntu uqobo, iGoogle ayiniki ukufinyelela kulokhu.
Amawebhusayithi ethu aqukethe izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi angabantu besithathu futhi kwesinye isikhathi sikhetha ukubamba iqhaza kumawebhusayithi okuxhumana nabantu kubandakanya kodwa kungagcini kuTwitter, YouTube, LinkedIn, nakuFacebook. Asinakho ukulawula phezu kwemikhuba yobumfihlo yalawa amanye amawebhusayithi noma izinhlelo zokusebenza. Kungumsebenzi womuntu ngamunye ukwenza isiqiniseko lapho beshiya iwebhusayithi yethu ukuthi bafundile futhi baqonda inqubomgomo yobumfihlo yewebhusayithi ngaphezu kweyethu.
Izinguquko kumgomo wobumfihlo
Le Nqubomgomo Yobumfihlo ingena esikhundleni sazo zonke izinhlobo zangaphambilini futhi ilungile kusukela ngo-Okthoba 2020.
I-GAAPP inelungelo lokushintsha le nqubomgomo yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi. Sizothumela noma yiziphi izinguquko zenqubomgomo yobumfihlo kuleli khasi. Uhlobo lwakamuva kakhulu luzothatha indawo yazo zonke izinhlobo zangaphambilini futhi seluleka abantu ukuthi babheke amakhasi ethu ngezikhathi ezithile.
Uma ukholwa ukuthi i-GAAPP ayihambisani nenqubomgomo yobumfihlo ethunyelwe, noma uma uneminye imibono, sicela usazise. Uma ufuna ukuxhumana nathi maqondana nale Nqubomgomo Yobumfihlo kanye nokucubungula kwethu imininingwane, sicela uxhumane nathi nge-imeyili ku-shintringer@gaapp.org noma ngeposi ku: Global Allergy & Airways Patient Platform, Altgasse 8-10, 1130 Vienna, I-Austria. Ungaxhumana nathi ngocingo: +43 (0) 676 7534200.